Waa tan sida loo caawiyo saaxiib inuu ka baxo xiriirka sunta ah - teles relay
By bryanekobe	 Last updated Jan 12, 2021
Saaxiibkaaga ma ku dhegan yahay xiriir sun ah laakiin ma garanaysid waxa aad sameyso si aad u caawiso? Waa kuwan talooyin kooban.
Muddooyinkii dambe tifaftiraha Trendy wuxuu ku siiyay 4 talo oo aad ku qanciso qof maraya waqti adag. Maanta waxay dhex gasho xiriir sun ah. Halkan, waxaan ka hadlaynaa xadgudub nafsiyeed oo nasiib darro mararka qaar la socon kara gacan ka hadal. Laakiin sidee ku aqoonsan kartaa jacayl burbur ah? Caadi ahaan, waa marka qofku la joogo lammaanaha ay u geysato iyaga waxyeello aan ka wanaagsanayn. Haddii aad aragto in saaxiibkaa uu ka xanuun badan yahay kan / isagu ku raaxeysiga jaceylkooda, waxbaa qaldan. Haddii dhaqankoodu isbeddelo, ama uusan faraxsanayn, ama ay hoos u dhacdo kalsoonidooda, waa in tallaabo laga qaado. Laakiin iska jir, waxaa fiican inaad iska ilaaliso inaad sagxadda cagta dhigto. Halkan waxaa ku yaal tilmaamo ku caawinaya saaxiibkaa inuu helo waddada farxadda.
Waa waxa ugu horreeya ee la sameeyo: noqo dhegeysi wax lagu dhageysto. U ogolow saaxiibkaa inuu kaaga sheekeeyo dhibaatooyinkooda oo uu halkaa u joogo / asaga / ayada. Ka dhaadhici inay fahanto inaad had iyo jeer halkaas joogi doonto haddii baahi jirto iyo gaar ahaan haddii ay rabto inay wax la sheekaysato. Hadday waligoodna yeellan, isaga / iyada ha u qaato waqti. Isaga / iyadu waxay u baahan tahay inay dareento raaxo ay kugu furmi karto. Ka fogow inaad aad u xanaaq badan tahay ama aad ku adkeysato inuu isagu / iyadu kala tago lamaanaheeda / keeda, tani waxay kaliya ku haysaa isaga / iyada oo xitaa isaga ama iyaduba way iska dhaafi karaan inay wax walba kuu sheegaan. runta cabsi laga qabo hadaladaada xun. Adigu uma aad joogin inaad ka doodid ama aad ka dhaadhiciso asaga / ayada iyo xitaa kayar inaad ku soo rogto aragtidaada. Waa inaad si xeeladeysan u keentaa inuu su'aal ka keeno xiriirkiisa. Ka tagida xiriirka sunta ah waa geedi socod dheer waana inaad dulqaad yeelataa.. La soco asaga / ayada oo u xaqiiji asaga / ayada, isagu / iyadu way kugu mahadin doonaan adiga.
Dhexgal ahaw sida ugu macquulsan
Xitaa haddii aad xanaaqsan tahay oo aad ka careysan tahay sida loola dhaqmayo saaxiibkaa xiriirkooda, iskuday inaad tallaabo qaado. Ha ku cadaadin isaga / iyada inay go'aan si dhakhso leh u gaadho oo aynaan maxkamadaynin lammaanihiisa / keeda. Xaqiiqdii ma yeelan doonto saameynta la rabo. Taas bedelkeeda, isaga / iyadu waxay halis ugu jiraan inay galaan difaac. Kaba sii darane, isaga / iyadu xitaa waxay u iman karaan inay difaacaan ciqaabtiisa. Marxaladda diidmadu way adag tahay in la maareeyo laakiin naftaada u sheeg in ay tahay wanaaggiisa kan ka horreeya xaaladdan. Si aad isugu daydo inaad isaga / iyada ka jawaab celiso, si kastaba ha noqotee waad ku qarin kartaa welwelkaaga iyo shakigaaga sida ugu cad cad ee naxariis leh.. U sheegida inaad danaynayso waxa ku dhacaya isaga iyo inay iyadu / iyadu leedahay taageero hagar la'aan ah si aad uga baxdo qabashadan ayaa muhiim ah.
La wadaag khibradaada shaqsiyeed
Waxaad u badan tahay inaad ka caga jiideyso inaad mawduucaan la soo qaado saaxiibkaa, laakiin ogow inay lagama maarmaan tahay in lala xiriiro asaga / ayada si looga hortago inuu ku dhaco kaligiis. Si aad uga dhigto inuu doonayo inuu furto waxa isaga / iyadu ay marayso, waxaad kala hadli kartaa isaga / iyada waxyaabaha ku saabsan cilaaqaadkaaga adag. Ama kuwa hareerahaaga ah. Ha ka baqin inaad nafsaddaada u muujiso inaad nugul tahay adigoo qiraya, tusaale ahaan, inaad mararka qaar ka cudur daarto dhaqan xumadaada hore ama aad si fudud u iska indhatirto calanka guduudan. Iskuday inaadan isbarbar dhig badan si uusan isagu / iyadu u dareemin wax isdabamarin. Waxay u muuqan kartaa wax iska cad laakiin u sharax iyada inuu xiriirku u maleynayo inuu kuu keenayo jacayl, farxad, nabad oo uusan xanuun kuu keenayn.. Isaga / iyadu waxay ogaan doonaan in isagu / iyadu aanu ahayn qofka keliya ee waxaas ku socda. Iyo nasiib kasta, waxaa laga yaabaa in sheekadaadu ay indhaha u furi doonto xaaladdeeda.
Ha xukumin iyada
Amaah: Gemma Chua-Tran oo loo maro Unsplash
Waxa ugu dambeeya ee saaxiibkaa u baahan yahay waa in la dhaliilo. Naga aamin, isagu / iyadu waxay durba dareemaysaa dareen ceeb ah inuu ku dhacay dabinka oo uu dhib ku qabo rogista bogga. Isaga / iyadu waa hubaal kan ugu horeeya (-re) ee raba inuu ka baxo jawigan culus. Halkii aad ku tuuri lahayd cod hoos u dhigaya wejigeeda, maskaxdaada fur. Wax kasta oo aad dhahdo, jilicsan. Laakiin ha ka baqin inaad weydiiso su'aalo ku saabsan xiriirkiisa. Si aad u ogaato sida isaga / iyada uu dareemayo, iyo sida xiriirkani u saameynayo isaga / iyada maalin kasta. Hadafka? In isagu / iyadu ay maqasho jawaabaheeda / jawaabahooda kor si ay isaga / iyadu u ogaadaan raaxo / darrida / ayada si ay ugu dambayn u hesho geesinimo ay ku baxdo. Isaga / iyadu waa inuu kaligiis gaaraan gabagabeyntan, sida iska cad kuma qasbi kartid inuu sidaas sameeyo. Waxaad si fudud u taageeri kartaa asaga / ayada inta lagu jiro kala guurkaan oo aan sahlanaan doonin.
Waxay kordhisaa isku kalsoonidiisa
Haddii saaxiibkaaga inta badan la yaso ama la bahdilo maalin walba xiriirkooda, kalsoonidooda ay isaga / iyada ku qabaan waxay u badan tahay inay qaadatay guul weyn. Isaga / iyadu waa inay hubaal tahay inuu u maleeyo inuu isagu / iyadu u qalmo inuusan ka fiicnayn xariggan aan caafimaad qabin. Marka ha ka waaban inaad xasuusiso sifooyinkiisa badan iyo wax kasta oo aad isaga / iyada ka jeceshahay. Ujeeddadu waa in kor loo qaado hankiisa / keeda sida ugu macquulsan si uu isagu / iyadu u fahmo inuu isagu / iyadu ka adag tahay sida uu isagu / iyadu qiyaasayo.. U cadee inuu isagu / iyadu xaq u leeyahay inay faraxsanaato. (-se). Inaad hesho dhammaan farxadda adduunka oo lagula dhaqmo qiimaheeda saxda ah. Kaliya isaga / iyada xoogga uu isagu / iyadu u baahan yahay si uu uga tago xiriirkan si aad u xun maskaxdiisa. Taageeradaada, isagu / iyadu waxay ugu dambayn yeelan karaan guji si ay uga baxaan.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka koowaad: https://trendy.letudiant.fr
saaxiibtiisxiriirka sunta ah
dagaalka dijitaalka ah ee neerfaha kahor doorashada madaxweynaha - Jeune Afrique
"Mareykanka wuxuu qarka u saaran yahay dagaal sokeeye"